🥇 ▷ Waxaan aaday Bingo waxaanan ogaadey dabinka inaad ku dhaafto boqolaal yuro hal habeen ✅
Waxaan aaday Bingo waxaanan ogaadey dabinka inaad ku dhaafto boqolaal yuro hal habeen
Dhismuhu wuxuu ku yaal Barcelona laakiin wuxuu leeyahay qurxin lagu xasuusto raaxada beenta ah ee Las Vegas. Inbadan oo nalka dabiiciga ah, sagxadaha rooga ah iyo dhammeystirka ayaa dhiirigaliyay 50-yadii si ay u siiyaan taabasho “chic” ah oo aan lagu guuleysan. Ka dib markaad ka gudubto albaabbada, mishiino badan oo godad ayaa ku soo dhoweynaya. Dhamaadka dhismayaasha waxaa ku yaal boqol miis oo aamusnaan buuxda leh, badankooduna way deggan yihiin. Intii aan raadineyno meel madhan, waxay noo soo diraan inaan xidno. Waa hal saac oo subaxnimo qof walbana wuxuu dhihi karaa waxay ku shaqeynayaan qof qalbi furan, markii run ahaantii la galiyo ciyaarta qamaarka.
Kaararka ugu horreeya ee bingo waxaan ku ciyaarnay shaashadda bartamaha miisaska oo dhan, halkaas oo lambarrada ay ku heesi jireen lagu muujiyey
Isla markii ciyaarta ay dhamaato, sharciga adag ee aamusnaanta ayaa nasiiya, qof walba wuxuu bilaabayaa hadalka iyo iibiyaasha kaararka. Miis bay miiska u saaraan, iyagoo u soo bandhigaya ciyaar cusub soosaarka, oo aad ugu kaladuwan, laakiin taas ayaa lagu soo koobi karaa laba qaybood oo waa weyn: kooxo asxaab ah, kuwaas oo u yimaada inay cabaan wax yar oo ciyaar ah, iyo khubaro, gaar ahaan Aasiyaanka iyo dumarka konton iyo konton jirkooda kaligood taga.
Waxaan faray kaarboorkii ugu horreeyay, laba Euro. Si wanaagsan ku bilow. Waxay odhanayaan tirooyinkeenna isla markaana muddo gaaban waxaan ku dhow nahay inaan khad ka dhigno. “Xariiq!”, Waxay ka heesaan dhinaca kale ee qolka. Aflagaadada iyo gujiska diidmada ayaa gadaal laga maqlaa. Keliya waxay qaateen 30 euro. Way sii wadaan ciyaarta. Xiisadda ayaa kacsan, tirooyinku way sii socdaan, in yar baa looga haray bingo – markii qof kale heesto. Dhowr qof ayaa la maqlayaa iyagoo ku tuuraya calaamadeeyaha miiska, isagoo xanaaqsan.
Sidaas ayaa lambarrada lagu shaaciyey intii lagu jiray ciyaarta
Dhawr ciyaarood oo xun, saaxiib ayaa raba inuu sigaar cabo. “Waxay ka timid dareemayaasha,” ayuu yidhi, isaga oo duulinaya sigaar. “Waxay umuuqataa been, laakiin waan kacsanahay.” Waa sax, xitaa saaxiibkayaga ugu nabdoon, oo ah iftiinka runta ah, ayaa qaylo ka dhex dhaliyay ilkahiisa. Waxaan nahay kuwa niyad jabsan, caadi ah. Ciyaartii ugu dambeysay waxaan goolal ka dhalin karnaa oo kaliya maxaa yeelay, macno ahaan, kaliya waxay yiraahdeen tirooyinka xiga ee naga xiga: haddii aan 7 haysan laheyn, waxay yiraahdeen 8. Haddii 43, 44. Markaa ilaa todobo jeer. Waxaan u imid inaan u maleeyay inay ahayd nooc ka mid ah shirqoolka karmic ee adduunka. Sida dhamaan kuwa lagu naqo.
Markii ugu horreysay tan iyo markii aan qaangaarka ahay waxaan ku sugnaa baar meesha aad ku qiiqi karto Spain. Qolka ciyaarta ayaa loo qaybiyaa laba, sigaar-cabayaal iyo kuwa aan sigaar cabin, marka waxaan si bilaash ah ugu bixin karnaa gacanyare ku xigeenka cusub halka saaxiibkeen uu iska siinayo. Waxaan gaarnay 2005, wax yar ka hor sharciga kahortagga tubaakada. Daruur qiiq ah ayaa hawada dhex galeysa, dharkaaga gelinaysa oo neefsashada dhib ku qabta. Indhaha ayaa gubanaya. Ma aan tijaabin sigaar muddo bilooyin ah waxaanan qabaa qufac aad u xun oo ka badan kan Oliver Twist ee ku dhaca dhexda pertussis. Waxaa ka mid ah ceeryaanta nikotiinka ee dhex marta qolka iyo qurxinta qarnigii la soo dhaafay, waxaan dareemayaa inaan hadda safar ku soo laabtay.
Tijaabada murugada leh ee mid ka mid ah guul darrooyinkii xalay
Qolkani waa buuxi, sidaa darteed waa inaan miis wadaagno. Waxaan la joognaa marwo, oo kaligeed ah, oo umuuqata inay ciyaarta xukumaan. “Ma haysaa 37?”, Ayuu u sheegay gabadha kaararka qaybisa. Madaxa rux. “Hagaag, waa isku mid, aniga i sii.” Ciyaarta waa dhamaatay walina ma uusan kicin xariiq. “Waan ogaa,” ayay haweeneyda cadhada muuqata u sheegtey. 37-ka waa lambarkeyga nasiibka leh, hadii uusan ku jirin guddiga, ma ahan anigakeyga. Markay gabadha kaararka kaararka gudubto, mid kale ayaa la weydiiyaa, mar kale iyadoo uusan jirin 37 (mar labaadna lumo).
Dhinaca midigteena, naag ayaa weydiisatay toban kaararka dharbaaxa. Waxba kuma taabato midna. Waxaan eegnaa miiskaaga: waa mid aad loo diyaariyey. Wuxuu xidhaa koofiyado koofiyad ah, nooc kiniiniga ah oo tusaya tirooyinka ay leeyihiin iyo rooti. Waxay bixisaa aura xirfadle ah. Xaqiiqdii waa la tayeysan yahay. Ka dib markii uu iga lumay toban kaar kale, wuu kacaa anigana waan raacayaa si aan u weydiiyo dhowr su’aalood, laakiin si dhaqso leh ayuu ii soo diraa. Waxa uu gacanta ku hayaa 100-euro biil oo uu ku codsado in la beddelo waxaanan garwaaqsaday in “khabiir ku taqasusay ciyaarta” ay u badan tahay dumar khamaar leh.
Waxaan eegay oo aan arkay taas, dhab ahaan, maahan midka keliya. Sida iyada oo kale, inka badan toban haween da ‘dhexe ah ayaa kaligood ciyaara, 1 subaxnimo, oo bixiya boqolaal Euro. Murugo yaab leh ayaa i cunaysa.
Xilli murugsan oo habeen ah, iyadoo la heesaayo lambarada Lizzo ayaa ku heesay oo ku dheeshay shaashadda weyn
Waxaan ugu soo laabanayaa miiska, iyadoo wax taabtay, oo aan ciyaarno ciyaar kale. Markan laba haween ah waxay ku heesaan “bingo” miiska soo socda. Dhanka kale, iyagoo faraxsan, waxay weydiisanayaan hal koob oo khamri ah si ay u dabaaldegaan oo ay noogu sharxaan inay tahay markii ugu horreysay ee ay yimaadaan: “Waxaan ku jirnay baar, waxayna na taabteen 80 euro oo gantaal ah. Waxaan usheegay saaxiibkey ‘tani waa masiir’, sidaa darteed waxaan u nimid bingo oo waxaan heesi jirnay bingo! Way na taabteen in ka badan 300 euro habeenkii oo dhan“” Waxaad dareemaysay dareen! “, Saaxiibkeed ayaa ku qaylinaya iyada oo qabsata iyada oo ku dhaqaajineysa cududdeeda midab ka badan Rosalia qoob-ka-ciyaarka roobka biilasha Milyanària.
Si sax ah, taasi waa runta murugada leh ee bingo: waa wax aan caadi aheyn. Waxaan la nimid fikirka ah inaan helno saynisyahano bingo kaasoo sharxay xeeladaha lagu helo baastada xitaa ganacsade, laakiin waxaan ku soo laabanay 20 euro oo ka yar (madax walba) waana niyad jab. Waxaa xaqiijiyey mid ka mid ah shaqaalaha, inuu dhammeeyo khayaalka. Waxaan arkay dad luminaya kumanaan euro. Toddobaadkan waxaan samaynay doonni bikeyn ah. Naag baa iibsatay in ka badan 100 kaar oo waxba ma qaadan. Taabadalkeed, qaar ka mid ah dhalinyarada timid ayaa doonta dooday afartii kartoonba. Ma jirto khiyaano. ”
Fikradaha aan ka soo aragnay miiska koowaad
Inbadan oo ka mid ah wadooyinka loo yaqaan ‘ludopaths’ waxay u maleynayaan: tan ku xigta inkeyga tahay, “laakiin maya, oo sidaas ayaa ah in kabadan 1000 euro oo horeyba loo qaatay. Rikoorku wuxuu ahaa 10,000, ayuu ku daray. Waxaan weydiiyaa haddii uu qof burburay. Xaqiiqdii isagu ma oga, laakiin wuxuu u maleynayaa sidaas. Waxaan isla soo marnay. Adrenaline ka fikirka in kan ku xiga ku taabto ama in aadan halkaa uga tagin illaa aad ka soo kabato wixii lumay, ayaa kaa dhigaysa inaad sii waddo. Hadana waad garan weyday oo waxaad lumisay tigidhada.
“Dadka qaar waxay xisaabta ku daraan xisaabinta si aysan u isticmaalin wax ka badan waxa ay kasban karaan hadii ay u heesaan bingo,” ayuu raaciyay. Kuuma ballanqaado inaad ka soo kabsaneyso kuwa kaa lumay, “taa kaliya ayaa go’aamisa nasiib”, laakiin waa hab lagu xakameeyo kharashaadkaaga. Ugudambeyn, gabagabada xalay waa in, sida Monopoly, mustaqbalka fog ee guuleysta uu yahay bangiga.